Nin Shactiroole ah oo dalka masar maxkamad la hor keenay. | Salaan Media
Home Wararka Nin Shactiroole ah oo dalka masar maxkamad la hor keenay.
(Massar): Bassam Youssef oo ah shactiroole u dhashay dalka Masar ayaa maxkamad dalkaas ku taala ku amartay in la hor keeno markii uu barnaamij uu leeyahay ku dacaayadeeyey madaxweynaha dalkaas masar Maxamad Mursi. Bassam oo ku soo caan baxay maada dhanka siyaasada xiligii kacdoonkii 2011kii lagu riday madaxweynihii hore ee dalkaas Xusni Mubaarak. Kacadoonkaas oo sababay in doorasho ku soo baxo madaxweynaha hada talada haya ee Maxamed Mursi kasoo ka sharaxnaa Xisbiga Walaalaha Muslimka ama Ikhwaan Al Muslimiin.
Bassam Youssef oo maxkamadii lagu sii wado
Bassam Youssef ayaa axadii isu soo dhiibay maxkamada sida uu uga jawaabo dacwado lagu soo oogay oo ay ka tirsanyihiin inuu hadal hoos u dhigaya Madaxwaynaha Mursi uu barnaamijkiisa ka yiri iyo hadalo ka dhan ah diinta Islaamka ee suuban.
Dhanka kalena mucaaradka dalkaa Masar ayaa ka muujiyey walaac maxkamada madaama uu garsooraha maxkamadaasi ay isku dhowyihiin madaxweyne Mursi iyo iyaga oo ku tilmaamaya inay la mid tahay ayamihii xukunkii hore ee dhacay ee Xusni Mubarak oo cadaadis saari jiray saxafada iyo wixii la mid ah.